Convert OST kuya ku-PST
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Exchange Recovery Convert OST Ifayela kufayela le-PST
Ukusebenzisa DataNumen Exchange Recovery ukuguqula OST Ifayela kufayela le-PST
Ngoba iMicrosoft Outlook ayikwazi ukuvula ifolda engaxhunyiwe ku-inthanethi (OSTifayela ngqo, lapho udinga ukufinyelela idatha ku- OST ifayela, kufanele uliguqule libe yifayela le-PST elingabonwa yi-Outlook.
Izimo ezithile ezijwayelekile lapho udinga ukuguqula OST ukuze PST yilezi:
Ibhokisi leposi le-Exchange elihlangana ne OST ifayela alitholakali ngenxa yezizathu ezithile nefayili ye- OST ifayela liyizintandane. Udinga ukuthola idatha kuyo.
The OST ifayela lonakele noma lonakele. Ufuna ukuthola imininingwane ekuyo.
Ufuna ukuthola idatha etholakala endaweni yangakini kuphela OST Ifayela.
With DataNumen Exchange Recovery, ungakwazi ukuguqula OST ifayela kufayela le-PST kalula nangendlela efanele.
Ukuguqula OST kufayela le-PST, sicela wenze lokhu okulandelayo:
Qaphela: Ngaphambi kokuguqula OST fayela kufayela le-PST nge DataNumen Exchange Recovery, sicela uvale iMicrosoft Outlook kanye nezinye izinhlelo zokusebenza ezingafinyelela noma ziguqule ifayela le- OST Ifayela.
Khetha OST ifayela elizoguqulwa:
Ungafaka i OST igama lefayela ngqo noma chofoza ukuphequlula bese ukhetha ifayela. Ungase futhi uchofoze ifayela le- ukuthola inkinobho OST ifayela elizoguqulwa kukhompyutha yendawo.
Ngephutha, DataNumen Exchange Recovery izoguqula i- OST fayela kufayela elisha le-PST elibizwa nge-xxxx_recovered.pst, lapho i-xxxx igama lomthombo OST ifayela. Isibonelo, komthombo OST Umthombo wefayela.ost, Ifayela le-PST eliguqulwe ngokuzenzakalela lizoba yiSource_recovered.pst. Uma ufuna ukusebenzisa elinye igama, sicela ukhethe noma usethe ngokufanele:
Ungafaka igama lefayela le-PST ngqo noma uchofoze ifayela le- ukuphequlula bese ukhetha igama lefayela le-PST.
Chofoza inkinobho, futhi DataNumen Exchange Recovery intando start ukuskena nokuguqula idatha kusuka kumthombo OST fayela kufayela le-PST oya kulo. Ibha yenqubekela phambili
Ngemuva kwenqubo yokuguqula, uma idatha iguqulwe ngempumelelo, uzobona ibhokisi lomyalezo kanjena:
Manje usungavula ifayela eliguquliwe le-PST nge-Microsoft Outlook bese ufinyelela idatha ekulo.
Convert OST Ifayela kufayela le-PST